Ra’iisul wasaare ku xigeenka somaliya oo la kulmay Ra’iisul wasaraha dalka Hindiya | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss
Home / Wararka Maanta / Ra’iisul wasaare ku xigeenka somaliya oo la kulmay Ra’iisul wasaraha dalka Hindiya
Ra’iisul wasaare ku xigeenka somaliya oo la kulmay Ra’iisul wasaraha dalka Hindiya
Raysal wasaare ku xigeenka somaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) iyo wafti uu hogaaminayo oo ku sugan dalka hindiya kana qayb galayey shirar calamiya aya manta kulan gaara la qatay raysal waraha dalka hindiya Mr. Narendra Modi.
kulankan oo qaatay saacado badan aya ka dhacay magalada New Dalhi waxanay labada masuul ka wada hadleen intii kulanku socday xidhiidhka ka dhexeya somaliya iyo dalka hindiya iyo sidii ay isaga kaashan lahayeen dhinacyada arrimaha bulshada khaasatan Caafimaadka iyo waxbarashadda iyo in Shacabka Soomaaliyeed loo fududeeyo dal ku galka Hindiya.
“Waxaan la kulanay Ra’iisal Wasaaraha Dalka Hindiya Narendra Modi, runtii kulankaasi oo aad muhiim u ahaa waxaanu kaga wada hadalay siddii labbada dal Soomaaliya iyo Hindiya isaga kaashan lahaayeen dhinacyada arrimaha bulshada, guul ayuuna ku soo dhamaaday”. sidaa waxa yidhi raysal wasaare ku xigeenka somaliya Mahdi.
Raysal waraha dalka hindiya Mr. Narendra Modi ayaa dhankiisa balanqaaday inay somaliya ay si dhow ugala shaqaynayaan xidhiidhka iskaashi ee arimaha bulshada,caafimadka,waxbarashada iyo ka diblumaasiyadaba.
Raysal wasaare ku xigeenka somaliya oo ku sugan dalka hindiya ayaa kulamo gaargaar ah la qadanaya madaxbadan oo ka socota dalalka caalmka oo ka qayb gelaya shirar caalamiya.